ရေနစ်သူကို ရှေးဦးသူနာ ပြုစုနည်း - Hello Sayarwon
ရေနစ်ခြင်း (Drowning) ဟူသည်မှာ ရေများစွာ ပြည့်နေသော ရေကန်ကြီးထဲ ပြုတ်ကျမှ ရေနစ်သည်ဟု ခေါ်ဆိုသည် မဟုတ်ပါ၊ သင်၏ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှ (အသက်ရှူရ ခက်ခဲလောက်အောင်) အဆုပ်ထဲသို့ ရေများ ဝင်လာခြင်းကို ရေနစ်ခြင်းဟု ခေါ်ပါသည်။ လူကြီးတစ် ယောက်သည် တစ်လက်မ၊ နှစ်လက်မ လောက်သာ ရှိသော ရေတွင် ရေနစ်နိုင်ပါသည်။
ကလေးငယ်လေးများအဖို့ ဗေဇင်၊ ရေချိုးဇလုံကဲ့သို့ ရေအနည်းငယ်နှင့်ပင် ရေနစ်နိုင်ပါသည်။ မူကြိုအရွယ်များတွင်မူ ရေကူးကန်များတွင် ရေနစ်ခြင်းသည် အဖြစ်အများဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ အတက်ရောဂါ ရှိသူများသည် ရေကူးရင်း အတက်ရောဂါ ကြွလာနိုင်သဖြင့် သတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရေနစ်ခြင်းသည် တစ်ခါတစ်ရံ လူမြင်ကွင်း တွင်ပင် အများမှ သတိမပြုမိဘဲ ဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။
ရေနစ်သူတွင် တွေ့ရသည့် လက္ခဏာများ
ရေနစ်သူတိုင်းကို ရေထဲတွင် ယက်ကန်ယက်ကန် အခြေအနေ တစ်ခုတည်းနှင့် တွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။ ငြိမ်သက်စွာနှင့် ဗောလောပေါ်နေခြင်း၊ ရေအောက်ထဲ မြှုပ်နေခြင်းလည်း ရှိနေနိုင်ပါသည်။ မကြာခဏ ရေတွင် ပေါ်လိုက်၊မြှုပ်လိုက် ဖြစ်နေပြီး ခေါင်းအနည်းငယ် မော့နေကာ ပါးစပ်ကို ကျယ်ကျယ်ဟ ထားသည့် ပုံစံဖြင့် တွေ့ရှိရနိုင်ပါသည်။ အများအားဖြင့် ရေပေါ်သို့ တစ်ကိုယ်လုံး ပေါ်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေတတ်ပြီး အသက်ကို အားစိုက်ရှူနေပေမည်။ တစ်ခါတစ်ရံလည်း အသက်မျှင်းမျှင်းသာ ရှူနေပေမည်။ မျက်လုံးပြူးနေပြီး အလွန်ထိတ်လန့်နေကာ ကယ်သောသူနှင့် အလိုက်သင့်နေသော အနေအထား ရှိချင်မှ ရှိပါမည်။
နှုတ်ခမ်းခြင်းတေ့ပြီး လေမှုတ်သွင်း အသက်ကယ်ဆယ်ခြင်းကို တတ်နိုင်သရွေ့ မြန်မြန်ပြုလုပ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သရွေ့ ဆယ်ယူပြီး သည်နှင့် (လှေပေါ်တွင်ပင် သို့မဟုတ် ရေတိမ်ပိုင်း ရောက်သည်နှင့်) စတင်သင့်ပါသည်။ အကယ်၍ ရေနစ်သူမှာ ကလေးငယ်ဖြစ်ပါက တတ်နိုင်သရွေ့ မြန်မြန် စတင်သင့်ပြီး ဆေးအကူအညီ မရသေးသရွေ့ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။
ဒိုင်ဗင်ထိုးပြီးနောက် ဖြစ်သော ရေနစ်ခြင်းတွင် လည်ပင်းထိ ခိုက်မှု့ ရှိနိုင်သောကြောင့် ဆယ်ယူရာတွင် တတ်နိုင်သရွေ့ လည်ပင်းကို မလှုပ်ရှားစေဘဲ ဆယ်ယူရပါမည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက ရေပေါ်ရောက်သည်နှင့် လည်ပင်းကို မလှုပ်အောင် ထိန်းသည့် ဒေါက်ကို တပ်ဆင်ပြီးမှ လူနာကို ရွေ့ပြောင်းသင့်ပါသည်။
ရေနစ်ခြင်းတွင် ရေသည် အဆုတ်ထဲသို့သာ မကဘဲ အစာအိမ် ထဲပါ ဝင်သဖြင့် ရေများပြန်အန်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ရေအန်ပါက ရေများ အဆုတ်ထဲ ပြန်မဝင်စေရန် ကလေးကို ဘေးစောင်း သို့မဟုတ် မှောက်၍ထားရပါမည်။ အများအား ဖြင့် အသံကြိုးများ ခံနေသောကြောင့် ရေသည်အဆုတ်ထဲသို့ ဝင်နိုင်ခြေနည်းသော်လည်း ဂရုစိုက်ရပါမည်။ ရင်ဘတ်ကိုဖိ၍အသက်ကယ်ခြင်းတွင် အစာအိမ်ကို မဖိမိစေရန် ဂရုစိုက်ရပါမည်။ သို့မှသာ အန်ခြင်းကို တားဆီးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ရေနစ်ခြင်း မဖြစ်အောင် ဂရုပြု ကာကွယ်ခြင်း
သုံးနှစ်အောက်ငယ်သော ကလေးများကို အစောင့်မရှိဘဲ ရေချိုးဇလုံ သို့မဟုတ် လေမှုတ်ရေကူးကန် အသေးများတွင် လွတ်မထားရပါ။ လမ်းလျောက်ကာစ အရွယ်များသည် နှစ်လက်မခန့် ရေအတက်တွင်ပင် ရေနစ်နိုင်ပါသည်။ ယင်းအရွယ်များကိုမူ ရေပုံးထဲ ရေထည့်ပြီး ပေးမဆော့ရပါ။ ရေပုံးထဲ ခေါင်းစိုက်ပြီး ရေနစ်နိုင်ပါသည်။
ကလေးအများစု သည် ပြင်ပရေကူးကန်များထက် ခြံတွင်း မတောတဆမှု့ များဖြင့်သာ ရေနစ်သေဆုံးသည့် ဖြစ်ရပ်သာ ပိုများပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးများကို အိမ်တွင်း ရေနှင့်နီးသော နေရာများတွင် ကလေးထိန်းမရှိဘဲ မလွတ်ထားရပါ။ ထိုနည်းတူပင် ခြံတံခါး၊ ခြံစည်းရိုးများကို ကလေးများ အလွယ်တကူ မဖွင့်နိုင် မထွက်နိုင်အောင် ဂရုပြုရပါမည်။
ထို့အပြင် ကလေးများကို အသက်ရှစ်နှစ် မတိုင်ခင်ကို ရေကူးသင်ပေးရန် စီစဉ်ပေးသင့်ပါသည်။ (ကလေးများသည် အသက်လေးနှစ် ကျော်လျင်ပင် သင်ပေးနိုင်ပါသည်။) ထိုနည်း တူ ဒိုင်ဗင်မထိုးခင်တွင် ရေအနက်ကို ဂရုပြုရန် လိုအပ်သကဲ့ သို့ ရေအလွန်နက်သော နေရာတွင်လည်း ဒိုင်ဗင် မထိုးမိရန် ဂရုစိုက်ရပါမည်။ ထို့အတူပင် ကလေးများသည် အလေ့အ ကျင့် မရှိပါက ရေမငုပ်နိုင်သည်ကို သတိပြုရန် လိုအပ်ပါ သည်။ ကလေးများ သာမက ကျွမ်းကျင်ရေကူသမား များပင် အဖော်မပါဘဲ တစ်ဦးတည်း ရေမကူးသင့်ဘဲ အဖော်ရှိမှသာ ရေကူးသင့်ပါသည်။
nlm.nih.gov. Accessed December 18, 2016.
emedicinehealth.com. Accessed December 18, 2016.